Meydka Nin laga jaray Qoorta oo Laga helay Boosaaso + DIGNIIN SAWIRO NAXDIN LEH – SBC
Meydka Nin laga jaray Qoorta oo Laga helay Boosaaso + DIGNIIN SAWIRO NAXDIN LEH
Waxaa Saaka Aroortii laga helay Xaafada Buulo Mingis ee duleedka Bari ee Magaalada Boosaaso Qof Meyd ah oo laga Jaray Qoorta Gacmaha iyo Lugaha kaasi oo lagu Qariyay Dhisme Qabyo ah oo ku yaala Xaafadaas.
Taliyaha Saldhiga Mijir ee Boosaaso Dhame Xamuud Salaad Cismaan ayaa warbaahinta SBC International u sheegay inay gacanta ku dhigeen Ninkii falkan geystay islamrkaasina Qiraal ku ah inuu Falkan ka danbeeyay.
Dhame Xaamuud ayaa Sheegay in Labada Nin ay ahaayeen Dadka shaqeeya Ka ganacsiga Mukhaadaradka Qamriga ka dibna uu Falka Dilka u geystay Ninkani Xilli Habeen ah iskaga oo sheegay in sababta uu u jarjarayna ay tahay Inuu qariyo Meydka Ninka uu Dilay.
Ninka Meydka ah ee Maanta laga soo helay Xaafada Buulo Mingis ee Duleedka Bari ee Magaalada Boosaaso ayaa waxaa laga jiray Qoorta Lugaha iyo Gacmaha iyadoo Qeyb ka mid ah jirkiisana uu ku riday Ninka Dilka geystay Musqul taasi oo haatan laga soo saaray Labadii Gacmood iyo Lugihii ninkan oo laga jiray dhinaca Sinta.
Dad badan oo saaka Tagay goobta uu falkan dilka ah ka dhacay ayaan garanin ninka La dilay welina lama helin Ehelkiisa waxaana saraakiisha Ciidanku sheegeen Inay wataan Baaritaanka kale oo la xiriira waxa ku kalifay Falkan Dilka ah ninkani.
Dhacdada Dilkan Aragagaxa Leh ee Maanta ka dhacday Boosaaso ayaa dad badan ku tilmaameen in Falka noocani ah uu yahay mid ku cusub Shacabka Reer Puntland.
FG:Sawiradan Waa sawiro naxdinleh fadlan haddii aadan Awoodin in aad daawato Hadaawan,, Inkastoo aan yara qarinay.
Noofember 6, 2012 at 4:30 pm
waa wax laga naxo runtii qof walba oo islaam ahna wuu dareemaya dhibta ay leedahay in qof muslim ah dhib noocas loo geysto waana ficil xaquuqul insaanka ka baxsan
Noofember 7, 2012 at 8:36 am
1: INAA LILLAAHI WA INAA ILEYHI RAAJICUUN
2: Run ahaantii arinta dhacday waa arin aad looga qiirooday waana arin xaqul aadanaha ka baxsan
Daallinka ficilkaa sameeyeyna waa daalin halis’ah waa in bulshada dhexdeeda aan lagu soo deyn waayo waxaaba suuragal ah in uu kamid ahaa daalimiinta hubaysan ee ku sugan koonfurta soomaaliya ee lamagac baxay ALSHABAAB.
Daalinka noocaas oo kala ah bulshadu waxay ku xukumi kartaa dil dilkaaso ah daldalaad naxariis dara’ah waayo isagaa bilaabay indha xumada noocan ah.
dhaawaca uu bulshada soo gaarsiiyey waa mid may mudo dambe kasii xanuunsan doonaan khaasatan ehelkii uu ka dhashay marxuumka sabab walbaba ha u dhintee maadaama uu hada geeriyoodeey waxa nagu waajib’ah inaan dhahno INAA LILLAAHI WA INAA ILEYHI RAAJICUUN
xanuunka aan hada dareen sanahay mid sagaal jibaaran waxaan dareensan hooyadi iyo aabihii dhalay Marxuumka sida hoogan loo jarjaray oo aan inaba naxariista loo gelin oo aadka loogu tagri falay qof ahaantiisii.
INAA LILLAAHI WA INAA EILEYHI RAAJICUUN.
ali moha haji says:
Noofember 7, 2012 at 3:53 pm
la yaab kii ugu danbeeyay o bosaso ka dhaca
Noofember 7, 2012 at 3:55 pm
la yaab ki ugudanbeeyay bosso